February 2020 - CeleLove
လူတိုင်းသိရှိထားသင့်တဲ့ ကုသရန် ခက်ခဲသူများအတွက် အဖုအကျိတ် ပျောက်စေရန် နည်းလမ်း
လူတိုင်းသိရှိထားသင့်တဲ့ ကုသရန် ခက်ခဲသူများအတွက် အဖုအကျိတ် ပျောက်စေရန် နည်းလမ်း စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို ယခုတင်ဆက်မှာကတော့ လေူတိုင်းသိရှိထားသင့်တဲ့ ကုသရန် ခက်ခဲသူများအတွက် အဖုအကျိတ် ပျောက်စေရန်နည်းလမ်းကို တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါသည် …။ လက်တွေ့ကြုံမှ ဆေးမြီးတိုကို ယုံမိသည်။ အဖုအကျိတ်ဖြစ်၍ သိပ္ပံဆေးဝါးဖြင့် ကုသရန် ခက်ခဲနေသူများအား ထိလည်းထိရောက် ငွေကုန်ကြေးကျ […]
အနမ်းတကာ့အနမ်းထဲမှာ ဒီနေရာလေးကို နမ်းတာ အကောင်းဆုံးအနမ်းပါ…
အနမ်းတကာ့အနမ်းထဲမှာ ဒီနေရာလေးကို နမ်းတာ အကောင်းဆုံးအနမ်းပါ… အနမ်းတကာ့အနမ်းထဲမှာ နှဖူးကိုနမ်းတဲ့အနမ်းလေးက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သက်သေများ အနမ်းဆိုတာ ပုံစံမျိုးစုံ ရှိသလို လူတွေကလည်း မတူညီတဲ့ အနမ်းတွေကလည်း မတူညီတဲ့ ခံစားမှုတွေ ခံစားရလေ့ ရှိပါတယ်။ ချစ်သူချင်း နမ်းတာ၊ မိတ်ဆွေအချင်းချင်း နှုတ်ဆက်တဲ့အနမ်းတွေအပြင် နမ်းတဲ့အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ နဖူးကို […]
နှစ်မိနစ် အချိန်ပေးရုံနဲ့ သွေးတိုးကျစေမယ့် နည်းလမ်း
နှစ်မိနစ် အချိန်ပေးရုံနဲ့ သွေးတိုးကျစေမယ့် နည်းလမ်း သွေးတိုးခြင်းက ခံစားရခက်တဲ့ ဝေဒနာတစ်ခုပါပဲ။ သွေးတိုးကျဖို့အတွက်ဆိုရင် အပ်စိုက်ကုပညာရှင်အတွက် အိပ်တစ်ချောင်းပဲ လိုအပ်မှာပါ။ သွေးတိုးတာကို နှစ်မိနစ်အတွင်း သက်သာသွားစေမယ့် နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ သွေးတိုးနေတာကို သတိထားမိဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ တချို့က သွေးတိုးနေတာကို သူတို့ ကိုယ်တိုင်တောင် မသိကြပါဘူး …။ […]
ကိုယ့်ကိုချစ်မယ့်လူမရှိရင်တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်အောင် နေထိုင်နည်း
ကိုယ့်ကိုချစ်မယ့်လူမရှိရင်တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်အောင် နေထိုင်နည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ လူတိုင်း ကြိုးစားရပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ ကြိုးစားတာက အပြောသာလွယ်တာပါ။ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ဖို့က ခက်ခဲပါတယ်။ အပြိုင်အဆိုင်တွေ၊ နှိုင်းယှဉ်မှုတွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တဲ့စိတ် ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ အခြားလူတွေက ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့အချိန် မချစ်တဲ့အချိန်မှာတောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်ရပါမယ် …။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်လာဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေကတော့… (၁) […]
ဘဝကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကြောင့် ရင့်ကျက်လာခဲ့ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ . . .
ဘဝကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကြောင့် ရင့်ကျက်လာခဲ့ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ . . . လူတစ်ယောက်ဟာ မွေးဖွားလာကတည်းက ရင့်ကျက်ပြီးသားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မွေးဖွားလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘဝကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေ၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ အရမ်းများလာတဲ့အခါမှာ ပိုပိုပြီး ရင့်ကျက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မဝေဖန်ခင်မှာ သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတွေ၊ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုလေးစားပေးသင့်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဘဝကပေးတဲ့ […]
ခြင်မလာအောင်ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ် သိတာတောင်နောက်ကျနေတယ်
ခြင်မလာအောင်ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ် သိတာတောင်နောက်ကျနေတယ် ခြင်မလာအောင်ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ် …။ စပါးလင်ကို ဒီလိုလေးထားလိုက်တာ ခြင်တစ်ကောင်မှ မရှိတော့ပါ …။ သိတာတောင် နောက်ကျနေပါတယ် …။ မီကာဇာ (မာကျူရီ)ဟိုတယ် ရေကူးကန်ဘေးမှာ စိုက်ထားတာတွေ့လို့မေးကြည့်တာ ခြင်မလာအောင်လို့ပြောလို့ စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ် …။ ကျွန်တော်ဆေးဆရာ တယောက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ…။ […]
ခဏအတွင်း ပိန်သွယ်ချပ်ရပ်သွားစေမယ့် လူသိနည်းတဲ့ ဆီးဖြူသီးကြိတ်ရည် အကြောင်း ဆီးဖြူသီးဟာ ချဉ်ပြီးဖန်တဲ့အရသာလေးနဲ့ စားလို့ကောင်းပြီး ပေါပေါလင်လင်ရနိုင်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား …။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အစာခြေစနစ်ကို အထူးကောင်းမွန်စေတဲ့အပြင် ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝလွန်းတဲ့ သစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ် […]
လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ စုံတွဲတိုင်း မဖြစ်မနေ စဉ်းစားထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ(၅)မျိုး လူနှစ်ယောက် ချစ်သူတွေဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာ သိပ်မခက်ပေမယ့် နှစ်ယောက်သားလက်တွဲပြီး အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေသာယာဖို့ဆိုရင်တော့ ထင်သလောက် မလွယ်လှပါဘူး …။ ပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုတွေအရ ချစ်သူစုံတွဲတွေ တော်တေ်ာများများက အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက်စဉ်းစားရာမှာ တချို့အချက်တွေကို ထည့်မစဉ်းစားမိတတ်ကြဘူးဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ် …။ ဒါဆို စုံတွဲတွေအနေနဲ့ […]